Ji Chang Wook ရဲ့ အသစ်ထွက်မယ့် Fabricated City – Korea Celebrities Fans
Ji Chang Wook ရဲ့ အသစ်ထွက်မယ့် Fabricated City
Title – Fabricated City
Actors – Ji Chang Wook & Shim Eum Kyum , Ahn Jae hong
Directors – Park Kwang Hyun
Production Company – TPS Company
Entertainment – CJ Entertainment
Release Date –9. Feb . 2017
တကယ်တမ်း ချန်းဝူးက အလုပ်လက်မဲ့ Gamer တစ်ယောက်ပါ ။ တစ်နေ့မှာတော့ ~~ သူသုံးနေကျ Internet Cafe ဆိုင်ထဲ Game ဆော့နေရင်း လုံးဝအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခုကြောင့် ယူ (ချန်းဝူး နာမည်) ဟာ မူးမေ့လဲသွားပါတယ် ။ သူကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းက အထက်တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်သွားတဲ့ အမှုမှာ သူက ထိပ်ဆုံးက တရားခံဖြစ်နေလို့ပါပဲ ။ ရဲတွေရဲ့ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ အဲဒိပြစ်မှုမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ချောက်ချခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ်။ တခြား Hacker သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ သူဟာ သူ့ရဲ့နာမည်ဆိုးကို ပြန်လည် ဖြိုချခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ဆယ်တင်ပါတယ် ။
K2 မှာ ကတော့ သူဟာ Body Guard တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ Hacker တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာလည်း K2 ထဲကလို ပြေးလွှားရုန်းကန်နေတာတွေ , individual Scene တွေတော့ များနေမှာပါ ။
Feb9ရက်မှာထွက်ရှိမယ့် Fabricated City ကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ !@!
Previous Previous post: G Dragon နဲ့ ကောလဟာတွေ ထွက်နေတဲ့ ဂိုဟာရာ
Next Next post: Song Jong Ki’s Film List